UCaster uzodalula konke ngempilo yakhe encwadini
UCASTER Semenya uzokhipha incwadi ezodalula konke ngempilo yakhe Isithombe: BACKPAGEPIX
UDALULE izinhlelo zokukhipha incwadi ekhuluma ngempilo yakhe umsubathi ovelele wakuleli, uCaster Semenya.
USemenya wanqoba izindondo zegolide kuma-Olympic eLondon naseRio ku-800m kodwa usebhekene nezingqinamba eziningi ngenxa yezinga eliphezulu le-hormone itestosterone, egazini lakhe.
Inhlangano eyengamele ezokusubatha emhlabeni iWorld Athletics, yashaya umthetho wokuthi abesifazane abanamazinga aphezulu e-testosterone, kufanele bayehlise ngaphambi kokuba bavunyelwe ukuncintisana emijahweni ephakathi kuka-400m no-1600m.
Wala waphetha uSemenya ukusebenzisa imijovo noma amaphilisi okwehlisa i-testosterone, wakhetha ukuluyisa enkantolo udaba kodwa yamchitha. Lokho kuholele ekutheni angakwazi ukuvikela isicoco sakhe kwi-800 kuma-Olympic, abeseTokyo nonyaka.
Ngokwesitatimende esikhishwe yiW.W. Norton & Company, nokuyiyo ezoshicilela incwadi ezobizwa ngeSilence All the Noise, izogxila empilweni kaSemenya nakho konke asedlule kukhona.
“Impilo yami ibe nezingqinamba kodwa nenjabulo ibiningi," kusho uSemenya esitatimendeni.
"Ngifuna ukusebenzisa impilo yami njengesibonelo, ngifundise umhlaba ukuthi ungabamukela kanjani abantu abazalwa behlukile. Kuningi osekukhulunyiwe kwaphinde kwabhalwa ngami futhi abantu bajwayele ukungibona ngigijima noma ngamukela izindondo kodwa kusekuningi engidinga ukukuchaza.
"Ngifuna ukucacisa ngamandla, isibindi, uthando, ukuqina nokumela lokho oyikho. Ngifuna incwadi ikhombise abantu emhlabeni ukuthi bangakwenza kanjani lokho,“ ngokusho kukaSemenya kwisitatimende.
Alukadalulwa usuku ezophuma ngayo incwadi. Njengoba engaphumelelanga ukungenela ama-Olympic aseTokyo, uSemenya usengene emkhakheni wokuqeqesha. Kumanje ucija umsubathi wakuleli uGlenrose Xaba, osabambe iqhaza kwiSpar Grand Prix Series.